IiNkonzo ze-Intanethi - UThixo Uyamangalisa
INkosi yethu uThixo uMninimandla onke iyamangalisa kuba Yena unguThixo oyoyikekayo. Izulu nomhlaba akunako ukuMxelisa ngokuba Ukhulu kunabo bonke esikubonayo kwaye siyazi ukuba. Ubungangamsha buzuko kwaye amandla akhe akanakulinganiswa. UBawo wethu wasezulwini ungcwele yaye uthando lwakhe luhlala ngonaphakade. Ubulumko bakhe bugqitha konke ukuqonda komntu. Izulu nehlabathi zihlala zicula iingoma zakhe kuba Ufanelwe.
Akukho namnye ufana noNdikhoyo kuba unguKumkani wookumkani kunye neNkosi yamakhosi. Amadoda aya kufuna uxolo ngexesha lokuphazamiseka, kodwa baya kufumana kuphela ukuba bafuna iNkosana yoxolo. Uxolo lwenene luvela kwiNkosi yethu uThixo uMninimandla onke kwaye uxolo lwakhe lugqitha konke ukuqonda. Khangela iNkosi ngentliziyo yakho yonke kwaye uyazi ukuba Uphakathi kwakho. UThixo ungowenu kwaye Akayi kukushiya nangona uhlupheke ngezilingo nosizi. Musa ukoyika uYehova kunye nawe kwaye ufanelekele ukudumisa kwakho.
UThixo waba ngumnye wethu ngoYesu, kwaye ngegazi lakhe siye safanelwa nguThixo kuba uhlambulule izono zethu. UBawo wasezulwini usikhulule ngeMvana. Siye sazingcwaliswa kwaye sigwetyelwa egameni leNkosi uYesu Kristu kunye noMoya oyiNgcwele weNkosi yethu uThixo uSomandla. UYesu Krestu oyintloko yamatye yekona uye wafaka ngenyameko ngamnye wethu kwithempeli elimangalisayo nelingcwele ekhonza njengendawo yokuhlala kaThixo ngoMoya oyiNgcwele. UBawo wethu Oyingcwele ufanelekile ixesha lakho kunye nenkonzo kwisidiliya seNkosi.
Thembela eNkosini ngayo yonke intliziyo yakho kwaye uyazi ukuba Uya kwenza. Njalo uyazi ukuba awukho yedwa kwiingelosi zeNkosi ulungiselela abo bafumana ukufumana usindiso. INkosi ikuthanda kwaye Unayo. Ngubani na onokumelana noMkhosi wemikhosi? Akukho mntu unako kwaye akukho namnye oza kuthanda. Yiba neentliziyo xa ukwazi ukuba ndiMkhulu mkhulu nguYe omileyo. Dumisani iNkosi yethu uThixo uMninimandla onke ngokuba ufanelwe.
Iicawa zikaKristu ziyakwamkela ukuba unqule iNkosi kunye nathi. Silapha ukukhonza uThixo nokukunceda ekuhambeni kwakho kunye neNkosi. Ukutyelela icawa kaKristu kwindawo yakho.